Mbido mbụ nke afọ | Site na Linux
Mbido mbụ nke afọ
diazepan | | Nkesa, GNU / Linux, Noticias
Nwere ike ịhụ na edere m banyere CUTI n'oge kwesịrị ekwesị n'ihi na enweghị ọhụụ ọhụụ emesịa. Taa, aga m ede ozi abụọ dị iche iche:
1) Nọmba abụọ (nọmba nke atọ) nke HD Magazin
Mbipụta ọhụrụ a dị ka ihe pụtara ìhè Ajụjụ ọnụ nke Eugenia Bahit na Richard Stallman, na mgbakwunye na ịnwe ihe ndị a:
1. Mgbochi ọgụ ike ọjọọ na mmadụ nọ n’etiti
2. Ndabere: Ana m echeta ha mgbe niile mgbe ha anọghị ya!
3. Arduino: Ihe omuma ihe omuma OpenSource
4. NoSQL Pụrụ iche: Okwu Mmalite ka NoSQL na igwe ojii ọrụ
5. NoSQL pụrụ iche: esịtidem Ọdịdị, koodu na onodu.
6. ọkọ: Chegodi, mmemme, kesaa.
7. PHP Web Ngwa Nche Guide
8. Patkpụrụ na imewe mgbochi ụkpụrụ Gịnị ka ha bụ?
9. Na-anwale matplotlib na ndị ọzọ "yuyos"
10. MVC Ntuziaka: (2) Echiche na-agbanwe agbanwe na ndebiri
11. Gaa GNU / Linux na Arch Linux: Akụkụ nke Abụọ
12. zingtụle ndekọ ndekọ Apache
HDMagazine n ° 2
2) ogo nke Gbanyụọ nke 2012
Anyị amataworị na ọ bụghị ọkwa a pụrụ ịdabere na ya, mana ewere ya dịka ntụnye nha anya maka ụfọdụ ihe.
Mint na-anọgide na-adị jụụ na 1st ebe maka afọ nke abụọ n'ahịrị, Mageia gbagoro wee dọpụ ebe nke abụọ site na Ubuntu (nke dara na nke atọ), na-emecha 10 kachasị: Fedora, OpenSuse, Debian, Arch, PCLinuxOS, CentOS na Puppy. E gosipụtara Snowlinux, ube, SolusOS na ROSA dị ka mbido kachasị mma (niile 4 na 25 kacha elu)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Mbido mbụ nke afọ
Ihe 38 kwuru, hapụ nke gị
Blaire kwuru dijo
Ọmarịcha, mbipụta nke atọ nke ndị na-agba ọsọ na ndị mmepe, yana distrowatch… Amabeghị m, enweghị m ike ịchọpụta otu Mageia nwere ike isi were ọnọdụ nke abụọ. Ọbụna aha ahụ anaghị ada ụda.
Zaghachi Blaire Pascal
Arch nọ na nke asaa ¬¬
Mana Ọfọn, dịka onye nchịkọta akụkọ kwuru, ọ bụghị ezigbo ntụkwasị obi.
Akwa maka HD M. ...gụ ihe ...
A ọmịiko m ọgbaghara na Arch ma achọtara m: Netrunner; ọdịnihu Kubuntu !!!
Mageia !!! uuuuu m nwere ike ide ofuma.
Obi ụtọ na mmalite afọ !!!!!!!
Daalụ maka post izizi, m na-eji Mint KDE maka ihe niile m gbalịrị ọ bụ ihe kachasị mfe ma "dị nro", agbanyeghị na achọrọ m ịhapụ ube ma ọ bụ ROSA, echefughị ​​Fuduntu nke na-arụ ọrụ zuru oke maka netbooks, agbalịrị m ya n'ọtụtụ na nsonaazụ ya dị ebube.
Achọrọ m ịme nhazi m nke afọ iji hapụ distro dị mfe ma dị mfe iji aka, Achọrọ m ịjụ gị na-enweghị agụụ ma ọ bụ ịnụ ọkụ n'obi iji kwado distro maka laptọọpụ Samsung RV408 na 6 GB Ram nke m na-agagharị, na-ekiri ihe nkiri, na-ege egwu ma na-ede ọrụ , Mmetụta na PDF na ụfọdụ oyiyi ọzọ retouching.
Na maka gị niile, achọrọ m ka ị bụrụ na 2013 ị nwere ike imezu nrọ gị.
Ubuntu 12.04.1, Fedora 18 na Arch n'ọdịnihu bụ ndị m kwadoro.
Arch dị ka ihe dị mfe iji, jikwaa ma mụta, nke kachasị mfe nke distros niile dị ugbu a, agbanyeghị na enwere obere obodo - ma e jiri ya tụnyere distros dị ka Ubuntu, Fedora, Gentoo, Debian ma ọ bụ ọbụlagodiSS - na-eme ya Ọtụtụ oge iji nweta ọrụ ịchọrọ achọrọ ka ị mụta ime ya n'onwe gị, nke a abụghị nsogbu ma ọ bụrụ na ịnwere ọtụtụ oge n'efu (kama ọ bụ uru n'ihi na ọ na-amanye gị ịmụ site n'ike!). Agbanyeghị, ma dị iche na ụfọdụ nnukwu obodo (Agaghị m enye aha!) Ọ bụ ezie na Arch bụ obere, ọ bụ obodo nke ndị maara ọtụtụ (A LOT), nke ukwuu n'ụdị obodo Gentoo, Debian ma ọ bụ Slack.
Ọ bụrụ na ịchọrọ KDE SC ma nwee oge iji hazie ma bulie akụrụngwa gị, wụnye Arch, ị gaghị akwa ụta, ọ bụ ihe magburu onwe ya, sọftụwia ọgbara ọhụrụ dị na ngwa siri ike, ọsọ ọsọ (ọsọ ọsọ), ọgbara ọhụụ na hyper-light distro. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe mkpọ ebe ihe niile na-arụ ọrụ site na mbido, echere m na Linux Mint KDE SC bụ nhọrọ magburu onwe ya (maka m karịa Kubuntu n'onwe ya) ma ị ga-ahụ na ndakọrịta zuru oke na Ubuntu, enweghị obere data.
Naanị nnukwu nsogbu na Linux Mint ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ * buntu bụ nsogbu nke PPA: iji nweta sọftụwia dị ugbu a na * buntu ị na-akwụsị mgbe niile ịgbakwunye PPA ebe ọ bụ na distro na-emelite nsụgharị nke mmemme arụnyere kwa ọnwa isii ọ bụla (enweghi ike ugbua na n'elu ikpo okwu dịka Windows ma ọ bụ MacOS ma ọ bụ Arch Linux n'onwe ya na-aga n'ihu na-emelite ozugbo ndị mmepe ahụ kwupụtara nsụgharị ahụ).
Nke a pụtara na ị nwere ike ịnwe esemokwu iji melite n'etiti nsụgharị yana na ị ga-enyocha ndepụta nke PPA mgbe emesịrị site na otu sistemụ nke usoro ahụ gaa na nke ọzọ ebe ọ bụ na a ga-ahapụ ọtụtụ nchekwa na ụzọ ma ọ bụ were oge na-agbanwe agbanwe iji melite. gaa na ụdị ọhụrụ nke buntu.
Ekele na «Obi ụtọ na New Year» 😀
Banyere Arch, ọ bụrụ na ọ dị mma, iji pacman yaourt Aur, nke ga-eweghachi m n'echeghị Arch. Mmelite na-aga n'ihu ma ọ bụ na-ebute ụzọ mgbe niile bụ ihe mbụ kpatara iji gbanwee gaa debian.
Naanị m na-eji Debian obere oge ma ọ bụ okwute 😀
A distro nke yiri ya na m na-ahọrọ bụ Sabayon, ọ bụ na-ebute ụzọ, ọ bụghị dị ka arch mana ahụrụ m ya nke ọma ma dịkwa mfe.
Coincidentally ụnyaahụ m nwere Sabayon 10 KDE SC marathon!
gburugburu ebe obibi dị oke mma ma zuru oke zuru oke - enwerekwa tweaks mara mma nke onye ọrụ ọ bụla dịka deactivating antialiasing, wdg.
.Rigo magburu onwe ya, ọ dị m ka ya bụrụ na e nwere ihe yiri ya na ndị ọzọ nke GNU / Linux ụwa 😀 - Kpọrọ, ahụrụ m ya n'anya, ọ bụ naanị nkwụsị dị mkpa iji nọrọ na-emelite na ozi obodo, melite sistemụ gị ma wụnye ma ọ bụ wepu mmemme. Ọ dị mma, nke ọma ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ejikọtara akara ngosi mmanya sistemụ ma mezue ọrụ ya n'ụzọ zuru oke.
.KDE SC na-eme nke ọma: ọ na-anabata ma ọ naghị adị arọ. N'ihi na a ngosi ziri ezi ị kwesịrị ị na-anwale ya na ezigbo HW kama a igwe. mebere.
Dịka onye nzuzu, ihe kachasị amasị m banyere Sabayon bụ nlebara anya pụrụ iche ha na-akwụ na kernel na nkọwa nchebe ndị ọzọ edepụtara na peeji nke nbudata; njirimara ndị a naanị (na ọ bụ 100% Gentoo) etinyelarị m ịhọrọ Sabayon karịa nke ọzọ.
.Gentoo bu uto uto !!!! Biko, usoro mmelite Gentoo nwere ike ọ gaghị abụ nkeooooooo, mana sooooo jiri nwayọ nwayọ !!! Ozugbo ọ wedara 500mbs nke melite (KDE SC 4.9 ka 4.9.4), ọ were ihe karịrị elekere iji mechaa melite sistemụ ahụ.
.Gentoo bụ astonishingly mgbanwe na ọ n'ụzọ nkịtị na-ahapụ ihe niile ruo ya ọrụ na-eme ihe ha chọrọ na ha usoro… ma Portage bụ TO ngwa ngwa, n'agbanyeghị na enyo na-emelite. Na mgbakwunye, Gentoo na-eme ka ihe dị mfe dị nro ma bụrụ usoro na-agwụ ike mgbe ị na-achịkwa ya kwa ụbọchị. Inwe imepụta ndepụta nke skins, faịlụ iji melite, wdg, bụ ihe siri ike na enweghị isi.
N'oge mmelite nke sistemụ arụnyere ọhụrụ, ọtụtụ njehie pụtara: http://imgur.com/a/2ESs2
Can nwere ike ịhụ na Sabayon 10 na-akpachapụ anya ma na ọ na-agbanwe ma ọ bụrụ na ọ dị mma:
Ihe omuma di iche iche nke Gentoo adighi etinye ihe obula na usoro dika Sabayon ebe a gha etinye ngwugwu ndi ozo na ichikota ihe ndi ozo site na isi ihe nke oma nke Gentoo nwere ike imebi ihe nile.
Ọ bụ ezie na nsonaazụ nke usoro Gentoo omenala nwere ike ịbụ usoro ọsọ ọsọ (ya mere aha ahụ, Gentoo bụ penguuin kachasị ọsọ) usoro ntinye na ndozi bụ nhụjuanya.
N'ikpeazụ, gbasara "ịrara gị nye" Debian:
Ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ ọfụma nke sistemụ sistemụ nwere ike ịdị na - ama jijiji - ọbụnakwa iwe ma ọ bụrụ na ihe niile anyị chọrọ bụ sistemụ na - arụ ọrụ nke ọma iji rụọ ọrụ ụfọdụ, agbanyeghị ịdị mfe ya bụ ihe na - eme ka ọ ghara ikwe m omume hapụ ya, na mgbakwunye, mgbe inwere sistemụ na - agba ọsọ ka ị ga - aga n’ihu n’iji ya ma ọ bụrụhaala na ịchọrọ n’emeghị ya, yabụ ị ga - enwe otu ụdị omume ahụ dịka usoro ndị a na - abụghị RR =)
N'ụlọ m nwere sava weebụ ma bipụta sava nke na-eji Ubuntu Server 12.10 eme ihe (nke m arụnyere n'ụzọ doro anya ka ọ ghara ịjị njin na Debian / Ubuntu) yana ọ bụ ezie na ọ dị ezigbo mma ịghara ichegbu onwe gị banyere ya karịa ịwụnye mmelite nche n'oge ọ bụla. Ekwesịrị m ịnagide usoro a bụ ọdachi dị nso (ihe niile ketara n'aka Debian):
Kedu ihe kpatara ndekọ aha ebe faịlụ Apache2 dị ka a na-akpọ apache2 (/ etc / apache2) mgbe aha e nyere ya site na elu bụ / wdg / httpd (aha nke Arch na-akwanyere)?
Ọzọkwa, sistemụ nke Debian kewara faịlụ http.conf yana mmejuputa ya nke akara njikọ maka saịtị arụ ọrụ ma ọ bụ ebe a na-adọba ụgbọala bụ ihe jọgburu onwe ya, onye bịara ụdị amamihe a?
Ma ọ bụ ihe atụ BIND9, ebe na Debian nhazi faịlụ na-ekewa atọ subdirectories kama ihe niile ịnọ na / wdg dịka ndị devs gosipụtara n'ụzọ doro anya?
Laa azụ, kpọmkwem otu ha na nginx !!!
Ọ naghị eju m anya na na Debian ọ na-ewe ogologo oge iji melite nchekwa ma ọ bụrụ na ha na-achịkwa ngwanrọ ọ bụla ha na-enye n'ụzọ dị otú ahụ!
Ghara ikwu banyere ule miri emi nke aghaghi ime iji chọpụta na ha na-arụ ọrụ nke ọma ma emesịa!
Ihe nkesa ọzọ m nwere bụ nke muscular: Ana m eji ya dị ka NAS, iji chịkọta na karịa ihe niile iji rụọ ọrụ igwe arụmọrụ nke m na-enweta site na iji X2Go (ezigbo ihe ọzọ na FreeNX ọ bụ ezie na ọ naghị adaba na ngalaba NX-3.5) ruo mgbe m ga-anwale phpvirtualbox.
Nke ahụ na-agba Arch (kedụ ihe ọzọ!) Ọ bụ ezie na m na-eji ya dị ka ebe nnwale maka ihe niile, ọ naghị efepụ m. Dịka m dị umengwụ, dị nnọọ umengwụ, dị ka ihe niile (ọ dị mma, ka m kwuo!?) Sysadmins yana ebe kọmputa ejikọtaghị ụgbụ ahụ, m na-emelite ya oge niile ma na-agụ akụkọ banyere mmelite zuru ezu iji debe oge. N'ikpeazụ, anaghị m emelite ngwa ndị na-eme nke ọma ọbụlagodi na wepụtara nsụgharị ọhụrụ, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, gịnị kpatara ịgbanwe? Ọ dị iche ma ọ bụrụ na ụdị mmemme ọhụrụ a na-eweta ọrụ ndị masịrị m, n'ọnọdụ ahụ ana m anwale ha na VM ma ọ bụrụ na ha rụọ ọrụ nke ọma m na-atụba ha na sistemụ agbanyeghị mgbe ụfọdụ m na-eche ozugbo ọnwa ole na ole iji hụ nzaghachi sitere na obodo ma chekwaa onwe m na-anwale ha n’onwe m.
Ekele ma nwee - nwee onye ọ bụla! - ezigbo 2013!
M ebudatara dị ka nkwanye gị ka ị nwaa Arch na ọ mere ọgba aghara nke mmalite, ọ na-ajụ m maka paswọọdụ na ihe ndị ọzọ ... Kedu ka m ga-esi kwado onye bịara ọhụrụ site na W $ distro nke m enweghị ike ịwụnye? Ihe m na-achọ bụ iji dọta ndị mmadụ na Linux, ọ bụghị na ha na-aga n’ihu ịhụ ya dịka ihe mgbagwoju anya ma sie ike iji. Daalụ maka nkọwa gị na ebumnuche gị dị mma.
Ekele na afọ ọhụrụ Happy
Na ndahie, awụnyere sabayon X na laptọọpụ ndị mụrụ m (wepu win7).
Awụnyere ya na 10 min, emelitere na 30 min (ngwugwu 487), ana m achọpụta hw niile. Ọ bụ 10 😀 distro
"Gentoo adịghị nwayọ" Ee, mana nkwụsi ike ya na - eme ya. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu 😀
N'ebe ozo, gentoo bu ihe itunanya.
Ọ ga-eyi uwe akwa dabara adaba maka ya.
Hahaha M raara Debian nye, ọ nwere ike bụrụ, m na-eji ụta maka afọ 3 wee m were ya dị ka Linux distro kacha mma.
Ugbu a ezumike dị n'ofe (M nwere izu 2 fọdụrụ: O) M na-achọ distro, ebe m anaghị alụ ọgụ na sistemụ ma ọ bụ nwee nsogbu n'ihi ntinye. (Maka nke ahụ, enwere m Windows hahahahaha m na-egwu egwu.)
Na njiko m nwere mmelite 2 ma ọ bụ 4 ebe m gbanyere usoro ahụ, ugbu a, m gbalịrị ịwụnye njiko na maka vidiyo vidiyo, ọ naghị ekwe m. (Obu ATI, ujo niile nke Linux). N'ezie, Arch mere ka m rie nri.
Ọbụna na nsogbu ya, debian na-enweta ihe na desktọọpụ pc m. Ọ bụ ezie na m na-eche maka ịwụnye gentoo 😀
M na-ejikwa Slackware anwale, mana ekwenyeghị m kpamkpam.
Ruo ugbua debian na sabayon emeela m obi uto.
Ọ bụ ezie na e nwere okwu n'etiti ndị na-agba ụta.
«Ozugbo arụnyere, ị na-abịa mgbe niile» na ọ mere m ọtụtụ ugboro 😀
Daalụ ... Ubuntu anaghị amasị m, m na-ahọrọ Kubuntu, Fedora na-eme ka m nwee akụkụ na .rpm na Arch mgbe ọ malitere ịwụnye ya na-ajụ m maka paswọọdụ na ihe ndị ọzọ dị ka ọhụụ ọhụụ m na-enweghị ike ijikwa, ihe m na-achọ bụ distro nke m nwere ike itinye ma jiri dị mfe ma na-atụ aro site na ihe atụ (ya bụ, igosi ya) nye ndị chọrọ ịgba alụkwaghịm W $.
Ahhh ah, Amaghị m na ị na-eme mgbanwe ahụ ma na-ebute ndị na-eso ụzọ ọhụrụ n'akụkụ Bright !! (akụkụ gbara ọchịchịrị bụ Windows, ị maara!).
Ekwenyesiri m ike na gị mgbe ahụ, m malitere na Ubuntu na n'ihi na m nwere mmasị na teknụzụ n'oge m gbanwere Arch. N'ezie mgbe obere oge site na Ubuntu (7.04 ruo 9.04, echere m) Achọrọ m ịkwaga KDE ma echere m ụdị 9.10 ebe ọ bụ na ndị gara aga ọ naghị aga nke ọma.
Kubuntu 9.10 gosipụtara na ọ jọgburu onwe ya dịka nsụgharị niile gara aga na mgbe izu 2 amalitere m ịlele ihe niile DistroWatch.com. Mgbe m chọpụtara Arch (site na ndapụta ebe ọ bụ na ọ bụghị na ndepụta ahụ n'oge ahụ, echere m) m hụrụ ịhụnanya na echiche KISS nke distro wee kpebie ịwụnye ya iji nwalee KDE ebe ọ bụ na ihe m na-achọ na ụkpụrụ bụ distro nke ga-agba ọsọ KDE nke ọma.
Naanị n'oge ahụ na Arch ha mere mgbanwe site na KDEmod (nke mechara bụrụ Chakra) gaa KDE zuru oke mgbe m wụnye ya wee lelee etu KDE si eme ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ distros m nwalere m maara na enwere ihe pụrụ iche.
Ka oge na-aga amatala m usoro ahụ nke ọma ma n'otu oge ahụ amalitere m ịrụ ọrụ na sistemụ ndị ọzọ na distros ma achọpụtara m ịdị mfe nke Arch.
N'okwu gị, echere m na e nwere isi ihe abụọ dị mkpa ka ị gbalịa ma zute njirimara ị na-achọ:
1. hapụ ihe niile !!
2. Mee ka ha dị mfe iji wụnye
3. mee ka ha dị mfe iji
4. ndị na-adọrọ adọrọ ma na-adọta ndị ọhụụ ọhụrụ.
elementrị OS na Linux Mint, ma dabere na Ubuntu na ọnụọgụ abụọ dakọtara, nke ahụ bụ ịsị na .DEB kwadebere maka Ubuntu nwere ike iji n'enweghị nsogbu na nsogbu ndị a.
N'ihe banyere OS nke elementrị, ọ dabere na Ubutnu 12.04 LTS ma nwee nkwado maka afọ ise. Ihe nkesa na-agbaso echiche nke Apple ya na MacOS ya: iji nye ngwa di ike mana o nwere ikike di nma na nke di nkpa nke otutu ndi oru na eji kwa ubochi. N'ụzọ dị otu a, distro nwere ngwa nke ya nke dị mma ma dị ezigbo mma, yana dịka ngwa ọ bụla enweghị "ọnụọgụ" ọnụọgụ nhọrọ, ndị ọrụ njedebe na-ahụ distro ahụ nwere ike iji rụọ ọrụ ebe ọ bụ na ha "efunahụ" na sistemụ ahụ. Etinyere m nwanne m nwanyi distro a. na akwukwo ya, o nwere Linux Mint 13 Cinnamon wee si «kedu mma !!! jee onye mba ofesi! enweghị ihe jikọrọ m na ihe m wụnye tupu, ọ dị ka prehistoric n'akụkụ nke a, daalụ !!! »
Linux Mint: Ndị asịrị ahụ na-ekwu na Linux Mint bụ "Ubuntu mere nke ọma" ọ bụ ezie na eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ezie na Ubuntu na-aga n'ihu na-eto site na mmụba ma na mmalite zuru oke na Mint, ha raara onwe ha nye iji dozie Ubuntu ma nyekwuo ahụmịhe onye ọrụ ọdịnala.
Enwere ọtụtụ nsụgharị nke Linux Mint ị nwere ike iwunye dịka ike HW nke igwe onye ọrụ, mana enweghị obi abụọ kachasị dị egwu Cinnamon (dabere na GNOME 3 na mmepe na-arụ ọrụ) na KDE SC.
Karịsịa ụdị KDE SC nke Linux Mint, ugbu a maka 4.9.4, nke ahụ bụ ịsị nke ikpeazu, magburu onwe ya ma mara ezigbo mma, dị mma nke ọma, na-egbu maramara, n'ezie ọ na-arụ ọrụ karịa Kubuntu n'onwe ya ma ana m akwado ya karịa Kubuntu ebe ọ bụ na distro ikpeazụ a dị ka akụkọ banyere ọkpọkọ ọma: na-efu mgbe niile 20 ctvs. maka ibu: P ihe na Linux Mint ị chọpụtaghị na na mgbakwunye na ị na-ahụ ụfọdụ ahụhụ ha na-edozi ya ozugbo enwere ike, ha anaghị echere nsụgharị ọzọ.
Ọ bụrụ na enwere ihe m ga-ekele Kubuntu maka ya, ọ bụ maka ime ka m mata Arch azụ na 9.10 mgbe m hapụrụ m na nsụgharị niile gara aga. Ọ bụrụ na Kubuntu na-eme nke ọma, ọ ga-abụ Arch taa mana m ga-akwado ya ...
Ahhhh ee, amaghị m na ịnọghị ebe a ogologo oge. N'ozuzu, ihe m na-egosi ndị enyi Windows m bụ Fedora KDE, na mgbe ụfọdụ ha na-agbagọ, agbagoro m 3 ndị ọrụ m kpamkpam na Linux, ọtụtụ na-anwale ugbua Banyere nsogbu, ana m akwado gị dị ka @msx Linux Mint, Elementary, na ndị ọzọ dịka SolusOS, PCLinuxOS na-ekwu. Ndụmọdụ m bụ na ọ bụrụ na ị nweta ahụmịhe, ọ bụrụ na ị ga - achọ ịmụ oge, nye Archlinux ahụ ọfụma, etinyegoro m ya.
@Ghermain, oburu na o gara nke oma, jiri Kubuntu. Ekwadoro m ka ị soro ntuziaka ndị a maka Samsung:
Zaghachi na Windóusico
Maka ọrụ ndị ahụ kwa ụbọchị, ịnwere ike ịhọrọ otu Ubuntu ma ọ bụ ụfọdụ ụdị dị iche iche nke ya gụnyere koodu ọdịyo na ndị ọzọ na-eme ka ọrụ gị dị mfe na pc gị;)!
Ezigbo mma gị mana maka uto m na ndị bịara ọhụrụ na W $ Ubuntu ọ dị ka ọ "dị larịị", agbanyeghị ụdị distro ọ bụla na KDE, nke anyị nwere mmasị na ya.
Enwere m na ndepụta Pear Linux (MAC na gburugburu ebe obibi), Rosa (ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ naghị amata nchịkwa ha; Echere m na m ga-atụfu ya) na Linux Mint 14 KDE. Na "tt" Sabayon na Chakra mana amasighi m obere nkebi ha na-eme na mmemme ufodu dika Firefox, LibreOffice, Thunderbird na ndi ozo na enweghi ego, otutu "disk" nke o na eme site na mmemme di egwu.
Ọ na-emetụ m na Manjaro adịghị na ndepụta ahụ. Ọ ga-abụ n’ihi na ọ ka dị ọhụrụ.
Daalụ maka magazin ahụ. Agụ !! 🙂
Ezi afọ ọhụrụ !!
Manjaro dị na 52
Ọ ka dịkwa ala, mana m nwere olile anya na ọ na-arịgo. O kwesiri ya. Ha emeela nnukwu ọrụ iji meziwanye njiri nke njiko.
Ọ dị ezigbo ala na tebụl kwa afọ, mana na tebụl nke ọnwa 6 ọ dị na 24 na ọnwa 3 na 17
Obinna 1 dijo
Daalụ nke ukwuu Diazepan maka ozi ahụ, ọgụgụ dị mma ịmalite afọ.
mmm Ọ bụrụ na m ga-etinye ọkwa na-ewu ewu ...
Agba nke 4
5th nke Debian
Zaghachi na egwurugwu_fly
Ahụrụ m Arch Linux n'anya XFCE, ugbu a, anọ m na ụlọ ahịa Apple
Obi ụtọ ịzụ ahịa na 2013.
Obi abụọ adịghị ya, Chakra ị Sabayon;)!
PS: Daalụ maka Magazin!
Ezi afọ ọhụrụ niile!
Enwerem ha "turu mmiri" ma amaghi m uzo o si eputa otutu mini diski kwa ngwa na anaghi ego.
Ufff! Daysbọchị 5 na-enweghị etinye ihe ọ bụla. Anọ m na-adọrọ mmasị ...
Zaghachi ka ridri
Hehehe Achọghịkwa m ịma. Nnukwu lecturitis, obi abụọ adịghị ya na blọọgụ a nwere ihe na-eri ahụ na imewe ma ọ bụ na posts. Mgbe obere oge gasịrị, ha na-ewebata ihe onyonyo subliminal n'oge ibu peeji ma si otú a mee ka anyị chọọ ịbanye XD.
Ezigbo ozi dịka oge niile na ịmalite afọ.
Achọrọ m ịgwa gị na, na-achọ KDE distro ịhapụ na akwụkwọ ndetu m; onye na-arụ ọrụ nke ukwuu na sayensị kọmputa gwara m ka m ghara ile anya ọzọ maka Kubuntu, Mint, OpenSuse, Chakra, Mageia, Sabanyon, wdg ... iji wụnye Netrunner (http://www.netrunner-os.com/) n'ihi na ọ bụ ogwe aka nke BlueSystems, yana na ha goro ndị mmemme ịrara oge zuru oke iji mezie ya.
Achọrọ m ozi site na google ma ọ dị ka nwatakịrị a dị ezigbo mma; ya mere, ebudatara m 12.12 site na x64, wụnye ya na ọ tụrụ m n'anya na etu esi arụ ọrụ na ngwa ngwa ọ na-arụ ọrụ, yana obere ihe oriri, ọ na-amata ngwaike niile, ma wụnye naanị ngwa ndị dị mkpa (LibreOffice, Gimp, Wine, Skype, VLC) , ịkpọ aha ole na ole) ndị ọzọ ị na-etinye ya na mkpa gị, na mgbakwunye na ọmarịcha mma mara mma.
Ọ bara uru ịnwale ya na ka anyị hụ mgbe ị na-aza ajụjụ ezi uche dị na ya.
Ime Anwansi Ime Anwansi.
Oge ikpeazụ m nyochara NetRunner ọ bụ ihe ọzọ karịa Kubuntu dị ọcha na nhọpụta aka ike nke nchịkọta GTK iji kpuchie ọrụ mmemme Qt dị ugbu a, nke ọma, hodgepodge obi ọjọọ; ee, o nwere nkwanye ugwu maka nna ya distro site na mgbe o webatara chinchi ya na ntupo ya niile !!
NetRunner masịrị gị karịa Linux Mint (ọbụlagodi ọrụ abụọ ahụ na-emekọrịta ọnụ)?
Ezi nyocha, ekele maka ego!
Ọ masịrị m karịa Mint na Kubuntu n'onwe ya, ọ bụ ezie na ha niile na-aga na BlueSystem, ihe ọhụrụ 12.12 nke Netrunner dị oke mmiri.
Dị ka «apostolate» 🙂 maka 2013 a bụ iji dọta ndị ọrụ W $ na Linux, nkesa a na-ahapụ ha ka ha kwuo okwu, dị ka ọhụụ ọhụụ anaghị m aghọta ihe ọ ga - abụ (na m rịọ mgbaghara maka amaghị ama) «nchịkọta GTK iji kpuchie ọrụ nke mmemme dị ugbu a Qt »mana maka ihe anyi choro dika oru di nkpa, o mezuru nzube ya 100%.
Ọ bụ eziokwu na o nwere ntụpọ ma ọ bụ akpachapụghị anya mana ugbu a ọ dị oke njọ na maka ihe iji were ndị mmadụ n'ọrụ maka ọrụ ahụ naanị.
Abụọ akụrụngwa 'toolkits' ma ọ bụ 'toolboxes' na sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ bụ GTK na Qt.
Dịka igbe ọrụ, anyị na-akọwapụta nke ọma: otu ngwaọrụ ejiri mebere ọba akwụkwọ, ihu dị n'etiti mmemme na sistemụ arụmọrụ, etiti etiti ihe emere na desktọọpụ nke anyị na-eji, wdg. Ma GTK na Qt bụ ndị na-ekpuchi C ++, ya bụ, C ++ "ndị na-ekpuchi"; nke a pụtara na ngwa ọrụ ọ bụla nwere ọrụ na-eme ka ọ dị mfe iji C ++ ma gbochie ndị mmemme ide ọtụtụ puku akara nke redundant koodu iji rụọ otu ọrụ ahụ.
GNOME (Unitydị n'otu, GNOME / Shell, Cinnamon, Xfce, Lxde, wdg) na-eji GTK na KDE SC (Razor Qt na ọhụrụ Be: Shell) jiri Qt. N’ụzọ dị otu a, GTK nwere ọrụ akọwapụtara nke chọrọ akwa ọzọ iji nwee ihu anya na ọnọdụ KDE yana ka gburugburu KDE nwekwara ike “ghọta” ihe ngwa GTK na-enye ya iwu, otu ihe ahụ dị na ngwa Qt na gburugburu GTK.
Ugbu a, ka enwere ike iji ngwa edere na GTK na KDE SC (yana nke ọzọ, ngwa Qt na GNOME) ọ dị mkpa ịwụnye ma tinye ebe nchekwa n'ọbá akwụkwọ dị iche iche nke bụ ndị na-atụgharị ntuziaka nke ngwa ndị a na-enye ka usoro.
Ebe ọ bụ na KDE SC bụ desktọọpụ dabere na Qt, ọ dị mkpa iji wụnye ọba akwụkwọ maka ngwa GTK ka ọ na-agba ọsọ na desktọọpụ ahụ + ọba akwụkwọ ndị dị mkpa ka e wee nwee nkwekọrịta anya n'etiti ha, nke a na-eme ka ọ dị mkpa iji ihe ndị ọzọ nhazi (CPU) na ebe nchekwa iji tinye ngwa ndi ozo na sistemu - o di nma, n’oge ugbua ihe a abughi nsogbu na komputa jiri i3,5 ma obu 7 processors yana 4, 6, 8 rue 16 gig nke ebe nchekwa dika o na-ahukari, N’agbanyeghi nke a Ọ bụ nsogbu dị na kọmpụta ụlọ dị ọnụ ala dị ka Compaq AIO ọhụrụ ebe ọ bụ na n'eziokwu, igwe ndị a nwere ndị na-arụ ọrụ ATOM ma ọ bụghị karịa 2gb nke Ram na kaadị eserese ejikọtara "na-erughị ezigbo mma" yabụ usoro dị arọ ga-emetụta n'ozuzu ngwa arụmọrụ.
Kpachara anya, maka ojiji nke ọtụtụ ndị ọrụ na-enye igwe ha, nke bụ ịnyagharịa ihu $ kụrụ ma mepee ngwa ngwa okwu ma ọ bụ ngwa foto ma gee egwu, AIO na Atom fọdụrụ, okwu a bụ mgbe mmadụ jiri Igwe karịrị nke ahụ, ị ​​ga-achọ ịkwalite ngwanrọ ma ọ bụ jiri sistemụ ọkụ.
N'ịlaghachi na ajụjụ gị, n'oge gara aga ọ bụ eziokwu na n'ihi KDE SC akụrụngwa n'onwe ya, nke a bụ usoro desktọọpụ dị oke arọ karịa nke dabere na GTK, ọdịiche dị taa enweghị nleghara anya ebe ọ bụ na nsụgharị Qt kachasị ọhụrụ ọ bụ jisiri ike idozi arụmọrụ nke KDE SC na nke GNOME - ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na KDE SC ka na-eri obere ncheta karịa GNOME.
Isi ihe dị iche bụ n'ihi ihe na-eme ka ịdị adị nke desktọọpụ ọ bụla: GNOME, ndị na-eso ụzọ nkà ihe ọmụma Apple maka MacOS, na-achọ ịnye ahụmịhe kachasị mma nke ndị ọrụ nwere obere nhọrọ. Ha na-agbaso ụkpụrụ nkuzi pere mpe nke pere mpe onye ọrụ ga-ahọrọ ma ọ bụ hazie, ka ha ga-arụ ọrụ na sistemụ. Ha kwenyesiri ike na naanị site na ịnye ha nhọrọ "ha chọrọ n'ezie" (rịba ama okwu m na-akwa emo) onye ọrụ ahụ ga-adị mma, n'eziokwu, ha achọghị ọtụtụ ihe karịa na n'ụzọ megidere ha nhọrọ ndị ọzọ iji nweta otu ọrụ ahụ adịghị arụ otu ọrụ. Peoplezọ ndị mmadụ sị "akwụkwọ ole, ugbu a amaghị m ihe m ga-ewere!"
Ha nwekwara ihe ụfọdụ kpatara ya.
N'ezie, maka onye ọrụ dịkarịa ala, nke ndị na-eme ka ọ dị eziokwu bụ eziokwu na nhọrọ ndị ọzọ ị na-enye ha ka ị ga-eme ka ọ sie ike, ha na-ahụ kọmputa dị ka ihe anwansi, igbe ojii na dị ka enwe ha maara na ọ bụrụ na ha pịa ebe a ihe dị otú a na-eme ma ha pịa E nwere ndị ọzọ dị otú ahụ. Maka ndị ọrụ a, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ njedebe, usoro nwere oke bụ ekpe.
Maka ndị ọzọ anyị chere na anaghị enwe oke na GNOME (ọ bụ ezie na mụ onwe m ghọtara ịdị ọcha na ịdị mkpa nke ngwa ya) enwere KDE SC onye ọnọdụ ya dị iche: "ka anyị nye onye ọrụ ọtụtụ nhọrọ dị ka o kwere mee ma hapụ ya ka ọ họrọ otu ọ chọrọ iji akụkụ ọ bụla nke usoro ahụ.
N'ụzọ dị otú a, ngwa ndị dị ka Gwenview (ndị eserese, vidiyo na ihe nkiri eserese nke KDE SC) karịrị ezigbo Anya nke Gnome, dịka oghere nke dị n'etiti Dolphin + Nepomuk + Strigi megide Nautilus ma ọ bụ n'ezie ọ bụla njikwa ihe osise ọ bụla nke Faịlụ ndị dị ugbu a - n'eziokwu Dolphin taa bụ onye njikwa faili ihe osise kachasị ike ma na-agbanwe agbanwe na nyiwe ọ bụla.
N'agbanyeghị mgbanwe a nke usoro KDE SC nyere ka onye ọrụ wee nwee ike ịnabata ya n'ụzọ ha si arụ ọrụ, yana ọnụọgụ nhọrọ nke ngwa ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ usoro siri ike ma dị arọ karịa GNOME, n'agbanyeghị, dịka m gwara gị taa, nke a Ntinye aka nke ilu nke KDE adịghị taa (na usoro nke oge a) ekele maka njikarịcha nke ngwa ọrụ Qt 4.8.
Na mmechi, ebe gburugburu GNOME gbara gburugburu ma na-amanye onye oru ka o muta otu esi eji ha ma megharia ha na oru ha, KDE SC na agba ndi oru ume ka ha choo uzo kachasi nma iji ya ma megharia ya na mkpa ha, nke a bụ ihe kpatara ị nwere ike ịchọta ọtụtụ puku desktọọpụ na-agba ọsọ KDE SC na ha niile ga - adị iche na Xfce ma ọ bụ GNOME desktọọpụ ha ga - adịkwu ọtụtụ.
N'okwu m, nlekọta na isi ojiji nke usoro a na-eme site na Yakuake na tmux, yabụ mgbe ịnabata ụfọdụ ihe dịka font size, font, antialiases na panel nkọwa, ana m eji KDE SC traditional
Akụkụ ikpeazụ m ga-achọ igosipụta na KDE SC (n'ime ọtụtụ puku o nwere) bụ njikwa zuru oke o nwere na windo: site na ịpị aka nri na windo windo ị na-enweta menu ebe ị nwere ike ịkọwa nke desktọọpụ ahụ windo na ajụjụ ma ọ bụ ngwa niile, nha mbụ, ọnọdụ ihuenyo na ihe karịrị iri na abụọ ndị ọzọ.
KDE SC bụ n'ezie ọmarịcha ọrụ nke na-enye onye ọrụ ya ike iji wuo ya ka ọ masị ha na mkpa ha.
==== Emechara m nyochaa Netrunner ka m kwusi okwu m, achọpụtara m na ekwuru m okwu nzuzu: Netrunner anaghị agwakọta GTK na Qt, ọ na-etinye ụfọdụ ngwa ọdịnala dịka GIMP ma ọ bụ Inkscape nke mepụtara na GTK mana imirikiti ngwa ndị ahụ bụ GTK , Mgbaghara! ====
Ikwu 1: Banyere okwu m: mgbe m na-eji Netrunner nke dị n'elu, ọ dị m ka ọ nwere ngwa GTK nke dochiri ngwa Qt natvias mana achọpụtara m na m kwuru nzuzu ebe ọ bụ na GTK na-ekpuchi ọrụ ndị isi.
Ikwu 2: Netrunner na-enye akara ngosi iji nweta Yakuake (ogwe nke na-ekpughere site na elu elu), iji jiri ya nke ọma na m kwadoro ụzọ mkpirisi keyboard (Alt + F12) ma ọ bụ nke dị gị mma karịa iji ahụigodo na sistemụ, na nke m Super (a na-akpọ Windows) na-ezighi ezi + Esc.
Nkọwa 3: Mgbe m nwesịrị menu ngwa Kickoff na nchịkọta KDE 4 mbụ m chọpụtara na Netrunner na-elekwasị anya na akụkụ ụfọdụ nke "mmekọrịta" nke net, na-atọ ụtọ enweghị mgbagha maka ụfọdụ ndị ọrụ mana enweghị oke maka m.
Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na otu n'ime ụbọchị ndị a ị ga-eju anyị anya site na ndetu banyere sistemụ arụmọrụ a ;-D
"Ebe ọ bụ na ọrụ GTK kpuchiri ndị isi ọrụ."
Nkọwa dị oke egwu, iji hụ ma "ndị amamịghe" nke W $ na-agwa gị ihe nke ukwuu
zuru ezu na ihe atụ.
Ọfọn, ị wepụwo m na amaghị ihe m na Linux. Agbalịrị m ịlaghachi
ihe dị ka ọnwa 9 iji gbalịa n'amaghị "ma ọ bụ tweet" nke a Niile Ndụ m kemgbe m tinyere
mkpịsị aka na keyboard M ji W $ n'ihi na ọ bụ nke etinyere na ya, na mkpịsị aka ya
M na-amụta iji ya na «na na ...» nnukwu ... ma dezie ya
formatted na emebi data, faịlụ, oge na ọbụna ngwaike; Amụtara m
ijikwa W $.
Ma ugbu a, site na enyemaka nke google san na gị onye na-achọghị ọdịmma onwe gị
imekota, M mụtara a otutu na m na-ama-atụle onwe m nwere nnọọ isi ihe ọmụma na
Linux ịhapụ ya dị ka naanị sistemụ na kọmputa m. N'agbanyeghị na netbook
a na-ahapụ W $ maka nke ọrụ ahụ, mana ozugbo enwere m ohere a
Mint ma obu Fuduntu m ga etinye gi.
N’ime ọnwa ndị a niile; M nwara ole distro m hụrụ na-achọ nke kacha mma na m chere
na m mechara chọta ya na Netrunner, esonyeere m ọtụtụ ihe na ngwa ngwa nke Arch yana
iwu maka ha, emeela m ka .deb na apt-get hehehe 🙂 (nka
nke W $, na-achọ ihe dị mfe nke pịa ma na-amaghị ihe kpatara) Linux ga
na-akụzi echiche na ịghara ịbụ naanị atụrụ ọzọ n’ìgwè atụrụ ahụ.
Olileanya ọtụtụ n'ime ndị na-agụ akwụkwọ ma jiri ozi ha chọtara,
hapụ ekele ma dee okwu ma ọ bụ opekata mpe, I meela
na-efu ihe ọ bụla na-eme ka ị na anya ọma, plus ọ bụ ihe mkpali maka ndị na-
dere edemede a, mara na oge gị lara n'iyi.
Ọtụtụ nde Ekele maka ihe niile ị na-atụnye.
"Olileanya na ọtụtụ n'ime ndị na-agụ akwụkwọ ma jiri ozi ha chọtara,
Nde nde na ekele maka ihe ọ bụla ị nyere. »
Otu ihe ahụ na-eme m, o doro anya na enwere nnukwu ego na mkpa maka okike nke / ndị mmepe nke ngwa ọ bụla, isiokwu nke akara ngosi, agba, ihe ọ bụla.com, nke na-apụtaghị na onye nwere ekele ruo mgbe ebighi ebi maka inwe ike iwe ha. kwuru mpempe software.
Ọfọn, m nyere PCLINUX monty na mini - great distro, m na-atụle ya # 1 [na m gbalịrị ọtụtụ] Ọbụna m zụtara DVD online [ụdị abụọ ahụ.] Anaghị m azụta DVD online - mana ogo OS a mere ka m kwenye. Ọ bụ inyefe ntọhapụ siri ike nkume distro. Ndo maka spanglish. Gbalịa ya !!
Ntinye: equo. Na-emelite kernel.
Akwụkwọ 25 kachasị agụ nke 2012